Momba anay-Fei Yeung Union
UNION TANORA FEI
Niorina tamin'ny 1993 tao Guangzhou, Fei Yeung Union dia nivoatra tamin'ny mpamatsy fitaovana dokambarotra ho mpamatsy vahaolana fanontana inkjet nomerika tao anatin'ny 20 taona lasa.
Ankehitriny, miaraka amin'ireo tambajotram-barotra sy serivisy napetraka manerana an'izao tontolo izao, ny Fei Yeung Union dia nahazo mari-pahaizana lehibe tamin'ny indostrian'ny famantarana. Fei Yeung, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa iraisam-pirenena hafa, dia manolo-tena hitondra vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa.
Tamin'ny taona 2001, ny famotsorana ny INFINIYI FY-6180, mpanonta printy solvent kely endrika, dia nampidina be ny varotra fidirana ho an'ny indostrian'ny fanontana inkjet ary nampiroborobo mivantana ny fivoarany, nitondra ny mpanonta solvent ho amin'ny vanim-potoana Made in China.
Manodidina ny taona 2005 dia nanomboka niara-niasa tamin'ny SII Printek Inc (SPT) ny Fei Yeung Union mba hamolavola sy hanamboatra mpanonta solvent resoution avo lenta, hitarika ny tsena fanontana inkjet China ho amin'ny vanim-potoana avo lenta.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, Fei Yeung Union dia nametraka famatsiam-bola be tamin'ny lamba, haingon-trano anatiny, haingon-trano ary kojakoja sns ... maro ny vokatra fanontam-pirinty inkjet nomerika nampidirina, nitarika pirinty inkjet nomerika ho amin'ny orinasam-pampiharana midadasika.
Taorian'ny fivelarana taona maro, ny fanontana nomerika nomerika dia nampiseho tombony manokana sy tombam-barotra lehibe. Eto amin'izao tontolo izao feno loko, ho fitaovana hanaterana loko sy hatsarana, ny fanontana inkjet nomerika dia manana habaka betsaka hanatanterahana azy. Azo antenaina kokoa ny fihinana eco friendly, ny hafainganam-pandeha avo lenta ary ny milina avo lenta kokoa!
Madio, maitso ary feno fanantenana ny ho avy! Fei Yeung Union dia te hiara-hiasa amin'ny mpiara-miasa rehetra amin'ny ho avy tsaratsara kokoa!